I-Design Design - Izigidi Zamamakhutha
I-logo eyenzelwe i-Professional Designer
kusuka ku-$ 200
Umdlalo ongashintshwa, onamandla futhi ophelele
ngecebo lenkampani yakho yokubamba uphawu
yakhelwe ngumklami welogo onguchwepheshe.
Orer Manje Isidingo Sokwazi
Inqubo Cela ikhodi
Lokho Esikwenzayo Kumasethingi Wokuklama Okumele
Ngemuva kokubeka i-oda, ukufonelwa ngocingo nguwe kuMenzi Wethu Wokulayisha.
Sinikeza izinketho ezi-4 ze-Logo ngesisekelo esifushane ngezibuyekezo zokwaneliseka kwakho.
I-logo yokugcina ihanjiswa ku-Ibhokisi lokungenayo lakho, futhi, liyatholakala ku-akhawunti yakho yoMenzi wezigidi.
Sitshele mayelana Nezidingo zakho Eziyisisekelo
Sisize Ukuhlola Okuningi ku-logo Yakho
Izosetshenziswa kanjani le logo?
Phrinta Ithuluzi Lokukhuthaza Iwebhusayithi Amakhadi webhizinisi
Sincoma ukusetshenziswa kombala we-2 omkhulu ku-logo.
Green I-Cyan Blue Purple pink Red Yellow iwolintshi Brown Tan Grey Akukho lutho White
I-logo kufanele ibe
Imali & Isheduli
Kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi i-logo ingubuso obaluleke kakhulu kumkhiqizo wakho, kungumbono wokuqala, ngakho-ke, okwenza kubaluleke kakhulu ukuyiklama ngokucophelela ngesisekelo semikhiqizo yakho nezinsizakalo, izimakethe ezigxile, indawo yabantu kanye nokuphela kwakho abasebenzisi.
Ukwenza kubaluleke kakhulu ukudala ukumelwa okubonakalayo okusebenzayo, okuthembisayo nokuthembekile kohlobo lwakho lomkhiqizo okungaphezu kokuqanjwa nje komfanekiso. Kuyisevisi eyengeziwe esihlinzeka ngayo, ukusiza / ukusekela imikhiqizo endaweni efanele.
Isitayela sokuthi Imikhiqizo Yezinkampani kanye / noma nezinsizakalo
Okulula. Ama-logo alula yilawo abantu abangawabona ngokushesha lapho bewabona. …
Iyabheda. I-logo enhle kufanele ibe lula ngokwanele ukuthi ikwazi ukukalwa phansi noma phezulu bese ibukeka kahle.
Engikhumbulekayo / Impactful. …
Kuyisevisi eyengeziwe esihlinzeka ngayo, ukusiza / ukusekela imikhiqizo endaweni efanele ..
$ 200 ngasikhathi sinye